बंगलादेश सँगको खेलमा १२औँ खेलाडी बनेर मैदान प्रवेश गरेकी पुनमको मु’टुमा स’मस्या । - Thulo khabar
बंगलादेश सँगको खेलमा १२औँ खेलाडी बनेर मैदान प्रवेश गरेकी पुनमको मु’टुमा स’मस्या ।
काठमाडौं : पहिलो पटक दशरथ रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै गर्दा बंगलादेशविरु’द्ध नेपाली महिला टोली १२ खेलाडीसहित मैदान उत्रियो ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा १२ खेलाडी मैदान प्रवेश गर्दा, मिडिया र दर्शक नै अचम्मित थिए । उपस्थित सबैले सोचे अखिल नेपाल फुटबल संघ ‍(एन्फा) ले ‘फिफा विन्डोज’को मैत्री’पूर्ण खेलमा ठूलो बदनामी कार्य ग¥र्‍यो ।
अझ फिफा फोर्थ रेफ्रीले ठूलो ग’ल्ती गरिन् । खेल अगाडि खेलाडी संख्या गणना गर्न भुलिन् । खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका दर्शक तथा शुभचिन्तकसमेत अचम्मित थिए ।
भ्रम’णकारी बंगलादेश र नेपालको राष्ट्रिय गानसम्म नेपाली टोली १२ खेलाडीसहित मैदानमा थियो ।
जब राष्ट्रिय गान समाप्त भयो, तब सुरु’वाती-११ बाहिर रेहेकी डिफेन्डर पुनम जर्घा मगर मैदानबाट बाहिर निस्किन् । नेपाली बेन्चमा रहेका प्रशिक्षक, प्रशिक्षक स्टा’फ, अफिसियल र बाँकी खेलाडीले पुनम बाहिर निस्कँदा मज्जाले ताली पिटिरहेका थिए ।
पूरा टिमको यो सम्मान पुनमप्रति थियो । पुनमसमेत मुस्कुराउँदै मैदान बाहिर निस्किन् । सबैलाई लागेको थियो यो एन्फाको ठूलो खेलाँची हो । यसअघि नेपाल र भारतबीचको मैत्री’पूर्ण खेलमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेको एन्फाले किन यतिको लापर’बाही गरेको होला ? सबैलाई लाग्न सक्छ ।
तर भित्री रहस्य भने निकै दुखद् रहेछ । पुनम खेल जीवनकै कठिन मोडमा रहिछन् । बंगलादेशसँगको दुई मैत्रीपू’र्ण खेलअघि एन्फाले फिफा नियमअनुसार सम्पूर्ण महिला खेलाडीलाई फिफा ‘प्रि–कम्पि’टिसन मेडिकल एसेसमेन्ट (पीसीएमसी)’ खेलअघिको स्वास्थ परीक्षण गराएको थियो ।
पीसीएमसीको रिपोर्टअनुसार पुनमले अब केहस् समय मैदान छाड्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कति समयको हुनेछ ? अझै निश्चित छैन । शुक्रबार दोस्रो पटक पुनमको पीसीएमसी गरिनेछ । त्यसपछि मात्रै उनको मैदान बाहिर कति समय बस्ने वा खेल नै छाड्नुपर्ने हो ? बल्ल यकिन हुनेछ ।
एन्फाले गराएको पीसीएमसी रिपोर्टअनुसार पुनमको मुटुमा समस्या छ । उनको मुटुमा प्वाल देखिएको छ, जसकारण पुनमलाई तत्काल डक्टरले नखेल्न आग्रह गरेका छन् ।
सन् २०२० को युरो कपमा पनि यस्तै देखिएको थियो ।
समूह बी अन्तर्गत डेनमार्क र फिनल्यान्डको खेल जारी थियो । खेलको ४३ मिनेटमा घरेलु टोलीका मिडफिल्डर क्रि’ष्टियन इरिक्सन मैदानमा ढले । हृ’दयाघा’तका कारण मैदानमा ढलेका क्रि’ष्टियनले प्राथ’मिक उपचारपछि जीवन भने जिते । तर करिब तीन महिना भइसक्दा उनी मैदान प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।
बारम्बारका यस्ता घट’नापछि फिफाले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई खेलअघि आफ्ना खेलाडीको स्वास्थ्य उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ । फिफाको निर्देशन पालना गरेको एन्फाले सो घटना नेपालमा भने दोहो’रिन दिएन । यदि पुनम स्वास्थ्य परीक्षण नगरी मैदान प्रवेश गरेको भए बिहीबार मैदानमा के हुन्थ्यो ? कसैले अनुमान गर्ने कुरा थिएन ।
पुनमलाई डाक्टरले तत्काल नखेल्न आग्रह गरेसँगै टिमले उनको मनोबल उच्च बनाउन १२ औं खेलाडीको रूपमा मैदान प्रवेश गराएको थियो । टिमका साथी र प्रशिक्षकले पुनमलाई पुनः त्यही अवस्थामा फर्कन प्रेरणा दिँदै मैदान प्रवेश गराएका थिए ।
‘पीसीएमसी रि’पोर्टपछि पुनमको मुटुमा केही समस्या भएको पाइयो । डाक्टरले उसलाई तत्काल नखेल्न भनेका छन्,’ महिला विभाग प्रमुख तथा पूर्वमुख्य प्रशिक्षक हरि खड्काले भने । पुनमको मनोबल बढाउन १२औं खेलाडीको रूपमा उनलाई मैदानमा पठाएको उनले बताए ।
‘रिपोर्टपछि हामीले बंगलोदशवि’रुद्ध उनलाई खेलाउन नसक्ने भयौं । उनको मनोबल बढाउन हामीले मैदान पठाएका हौं । बाँकी समयमा पनि पुनरागमन गरेर खेल्न सक्छ, यसरी फेरि खेल्नुपर्छ भनेर मैदान प्रवेश गराएका हौं,’ मैत्री’पूर्ण खेलमा टोली अफिसियलका रूपमा रहेका खड्काले भने ।
विभागीय त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबबाट खेल्ने पुनमले डाक्टरलाई अभ्यास र यसअघिका खेलमा खेल्दा कुनै पनि समस्या नभएको बताएकी थिइन् । टोलीका सदस्यअनुसार डाक्टरले पुनमको बच्चैदेखि मु’टुको समस्या रहेको बताएका थिए । तर, पुनमले अहिले आफ्नो मु’टुमा कुनै समस्या भएको महसुस गरेकी भने छैनन् ।
आधा दशकयता राष्ट्रिय टोलीको नियमित सदस्य रहेकी पुनम सेन्टर डि’फेन्डर हुन् । विराटनगरमा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा सेट पिसमा अगाडि बढ्दै पुनमले श्रीलंकाविरु’द्ध नेपाललाई १–० को अग्रता दिलाएकी थिइन् । पुनमको यो राष्ट्रिय टोलीबाट पहिलो गोल थियो ।
नेपालले बिहीबार बंगलादेशलाई २–१ गोल अन्तरले परा’जित गर्यो । नेपालको जितमा दुवै गोल डेब्यु खेलाडी सविता राना मगर र प्रीति राईले गरे । दोस्रो खेल आइतबार हुनेछ । –रमेश सुवेदी/न्युज कारखाना